Wuxuu Qoraalku marag-fur u yahay in talada dalka ku koobnayd Fahad iyo Famaajo (Fal-celin) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Wuxuu Qoraalku marag-fur u yahay in talada dalka ku koobnayd Fahad iyo Famaajo (Fal-celin) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxa Qoray: C/raxmaan C/shakuur: Shaqada sirdoonka laga rabo waxay ku xiran tahay aragtida xukun ee la doonayo.
Haddii xukun kalitalis ah laga hadlayo awoodda, hantida, tamarta iyo waqtiga waxaa la gelinayaa amniga kalitaliska. Sirdoonku wuxuu ka shaqaynayaa basaasidda, baacsiga iyo sumcad dilka mucaaradka, cabsi ku haynta kuwa daacada u ah rajiimka, shirqool iyo khaarijin, shaki kala gelinta bulshada, jahwareerinta iyo jihaynta ra’yiga dadwaynaha si loo jeclaysiiyo rajiimka, loogana raarido in la’aantii dalku dumayo.
Haddiise xukunku dimoqoraadi yahay, sirdoonku wuxuu qayb ka yahay ilaalinta iyo difaaca Amniga Qaranka oo ay ugu horrayso amniga muwaadinka, jiritaanka hay’adaha dawladda, dhaqaalaha dalka, amniga tamarta, cuntada, bay’ada, tiknoolajiyada, iwm.
Xukuumadda ayaa dejisa, fulisana qorshaha amniga qaranka. Baarlamaanka ayaa leh korjeegtaynta iyo la xisaabtanka hay’adaha amniga. Sirdoonkuna wuxuu hoos yimaadaa Wasaaradda ku shaqa leh ee madaxweyne ama Raysalwasaare midkoodna ma hoos tago.
Maadaama uu Taliyihii hore caddeeyey in qorshaha NISA lagu hagayey uu Madaxweyne hore Farmaajo lahaa waxaa cad in uu isagu lahaa amarkii iyo qorshihii:
”Maxaad ku falaysaa Guddoomiye Degmo oo hadaf muuqda Alshabaab u ah, adigoo heli kara in aad ku shaqayso nabadsugid dharcad ah oo toos ugu xiran taliye cid walba ka sarreeya, haystana awood iyo hanti aan la xisaabinaynin.Falsafada waxaa ka mid ah solipsism oo ah waxa adiga maskaxdaada ku jira ayaa xaqiiqa ah, cid kale waxba kaama quseeyaan. Waxay la mid tahay in uu ruux ku doodo “
Sanadkaas ayaa ah kii Soomaaliya ugu fiicnaa maxaa yeelay asaga lee og sababta. Mar haddii wixii maskaxdaada ku jira oo keli ah sax yihiin waxaad ku dhacdaa in aad dadka kale caqligooda ku xadgudubto oo aan tiraahdo “Dal aan 30 sano ka hor tababari jirnay, soddonkii aan burbursanayn isagu dawlad ahaa, ayaa weli tababar noo soo doonanaya” Waxaad kaloo oran kartaa “Soomaaliya waxay leedahay sirdoonka ugu fiican Afrika, oo ay wiil iyo hooyadiis u wada shaqeeyaan, laakiin caasimada ugu amaanka xun ayaa xarun u ah”
Waxaad kaloo dhihi kartaa “ Soomaaliya waxay lahayd Madaxweyne wadani ah, ciidanka Afrika ugu xooga badan, iyo sirdoonka ugu khatarsan aduunka, haddana dalkii burburo way ka celin waayeen”. Waxay la mid tahay adoo yiri “ ardayga ugu fiican waxbarashada Iskuulka ayaan ahay, laakiin Imtixaankii waan ku dhacay, sababtoo ah macalimiinta ayaa i neceb nooh” Soomaaliyana shirqool shisheeye ahaa dumiyey.
Halkan Ka Akhriso Qoraalkan wuxuu fal-celin u yahay faalladii uu qoray Fahad Yaasiin: Haddii aad wanaag fasho wanaag baa la fishaa (Qormadii Fahad Yaasiin- Faallo mise Olole Doorasho-)
Waxa Qoray: C/raxmaan C/shakuur
Musharax iyo hoggaamiyaha xisbiga Wadajir